Green Recorder 3.0 Kuburitswa: iyo nyowani vhezheni yeapp yekunyora desktop yako | Linux Vakapindwa muropa
Iko kune akati wandei maficha ekunyora zvinoitika pachiratidziri chedu, kunyangwe pazviitiko isu tataurawo dzimwe sarudzo dzekutora zvidzitiro zveconsole yedu. Zvakanaka, ivo vanogadzira chirongwa chatinokuunzira nhasi vaburitsa vhezheni itsva yeichi chishandiso, iri Green Recorder 3.0 inovimba nePython kuti iivake, iyo inozivikanwa uye ine simba FFmpeg uye GTK +3 kunyora zvese zvinoitika mune yedu sikirini uye kukwanisa kugadzira vhidhiyo dzidziso, nezvimwe.
Zvakare vhezheni itsva ine matsva maficha uye zvigadziriso. Sezvatinogona kuona mumufananidzo mukuru, chirongwa chine yakapusa graphical interface uye neakawanda anonakidza anoshanda. Kubva pazvirongedzero tinogona kusarudza kurekodha chisero chese kana chete hwindo chairo kana nharaunda, mafuremu pasekondi yekubata, mhando yeodhiyo kuburitswa uye fomati yevhidhiyo (codec), kunonoka kurekodha, nezvimwe. Tinogona zvakare kusarudza kwatinogona kusevha vhidhiyo yakatorwa uye kana tichida kurekodha zvinoitwa nemushonga wegonzo, vhidhiyo, odhiyo, uye kunyangwe tichida kuteedzera iyo inotora ...
Green Recorder 3.0 iri nyore uye inoshanda pane ese kugoverwa kweLinux, ndeye mahara uye inosunungurwa pasi peGPL 3v rezinesi. Iko kukanganisa kwandaive nako ndekwekuti haina kutsigira Wayland graphic server, asi ikozvino ine rutsigiro rweWayland. Nezve mafomati akatsigirwa evhidhiyo isu tine AVI, MKV, MP4 uye zvakare kugadzira maGIF, kunyangwe zvikamu neWayland zvichingotsigira WebM kwechinguvana uye ichashandisa V8 encoder nekuda kweCPU uye RAMmashandisirwo edambudziko matambudziko ane V9 vhezheni.
El GIF kutsigira Iyo ndeimwe yezvinhu zvitsva, mukuwedzera iyo mifananidzo yakagadziridzwa kuve nekuvandudzika mavari. Iye zvino isu zvakare tine mukana wekuchinja odhiyo yekuisa kana isu tine akasiyana masosi, chimwe chinhu chinokosheswa zvikuru. Uye zvechokwadi zvinotora mukana zvirinani kugona kweFFMpeg. Iyo sisitimu yekuona yakajeka graphic maseva aripo muhurongwa yakagadziridzwa zvakare, ichiwedzera mukana wekuti ubatanidze rutsigiro rwemaseva matsva emangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Green Recorder 3.0 Kuburitswa: iyo nyowani vhezheni yeapp yekunyora desktop yako
Mhoro, nei uchiti i "app"?
Mune dzidziso, ndinofunga, "app" ndeye mobile application, uye zvakanyanya kuApple. Izvo hazvina kuita seizvi?